စွန့်ပစ် လက်ဖက်ခြောက် ဖတ်တွေ အသုံးပြုနိုင် သေးတဲ့နေရာတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ။ •
05/10/2019 Yan Naing Editorial 0
စွန့်ပစ် လက်ဖက်ခြောက်ဖတ် တွေ ဘယ်နေရာမှာ သုံးလို့ ရသေးလဲ
ဒါတွေ အတွက် အသုံးတည့်တယ် ဆိုပါလား ?
ဈေးက ဝယ်လာတဲ့ ငါးက တော်တော်ညှီတဲ့ ငါးဆိုရင် လက်ဖက်ခြောက်ဖတ် နဲ့ အတူညှီနေတဲ့ ငါးကို အိုးတစ်ခု တည်းထဲ့ ပြုပ်လိုက်ပါ ငါးညှီနဲ့ လုံးဝ ပျောက်သွား ပါလိမ့်မယ် ။
လက်ဖက်ခြောက်ဖတ် တွေကို ရေအေးနဲ့ ရောပြီး မှန်ပြတင်းပေါက် အိမ်သုံး ပစည်း နဲ့ ရွှံ့ပေ နေတဲ့ ဘွတ်ဖိနပ် တွေကို ဆေးကြော ပွတ်တိုက်ပါ ။ ပြီးမှ အဝတ်သန့်နဲ့ ပြန်သုတ် လိုက်ပါ ။ သန့်ပြီး တောက်ပြောင် သွားပါ လိမ့်မယ် ။
လဖက်ခြောက်ဖတ် တွေကို ရေအေးနဲ့ ရောစပ်ပြီး မြေသြဇာရည် အဖြစ် အပင်တွေ ကို လောင်းပေး နိုင်ရင် သဘာဝ မြေသြဇာ ကိုရရှိစေ ပြီး အပင် တွေကို သန်စွမ်း ကျန်းမာ စေပါတယ် ။
လဖက်ခြောက်ဖတ် တွေကို အခြောက်လှမ်းပြီး ကြက်ဥ နဲ့ ပြုပ်စားရင် မွှေးကြိုင်ပြီး အရသာ ရှိလှ ပါတယ် ။
လဖက်ခြောက်ဖတ် ကို အခြောက်လှမ်းပြီး မီးရိူ့ရင် အနံ့အသက် ဆိုးတွေ ပျောက်တဲ့အပြင် ခြင်လည်း ပြေးတယ် ။ ခြင်ဆေးခွေ အစားလည်း အသုံးပြု နိုင်ပါတယ် ။
လဖက်ခြောက်ဖတ် တွေ ကို နေလှန်းပြီး ခေါင်းအုံး ထဲထည့် ခေါင်းအုံ့ အိပ်ရင်ပျော့ပြောင်းစွာ အိပ်စက် ရရုံ တင်မက အပူကိုပါ ကျစေပါတယ် ။
လဖက်ခြောက်ဖတ် ကို မျက်နှာပေါ် ပွတ်တိုက် ပေးခြင်း ဖြင့်လည်း မျက်နှာပေါ်ရှိ အမဲစက် / တင်းတိတ်များ ပျောက်ကင်း စေပါတယ် ။
ပြစ်ရတော့မဲ့ လဖက်ခြောက် တွေကို အကျိုးရှိရှိ သုံးဖြစ် စေရန် ရည်ရွယ်ရင်း မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်ရှင်
Credit to အကယ်ဒမီ
စှနျ့ပဈ လကျဖကျခွောကျ ဖတျတှေ အသုံးပွုနိုငျ သေးတဲ့နရောတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ။
စှနျ့ပဈ လကျဖကျခွောကျဖတျ တှေ ဘယျနရောမှာ သုံးလို့ ရသေးလဲ
ဒါတှေ အတှကျ အသုံးတညျ့တယျ ဆိုပါလား ?
ဈေးက ဝယျလာတဲ့ ငါးက တျောတျောညှီတဲ့ ငါးဆိုရငျ လကျဖကျခွောကျဖတျ နဲ့ အတူညှီနတေဲ့ ငါးကို အိုးတဈခု တညျးထဲ့ ပွုပျလိုကျပါ ငါးညှီနဲ့ လုံးဝ ပြောကျသှား ပါလိမျ့မယျ ။
လကျဖကျခွောကျဖတျ တှကေို ရအေေးနဲ့ ရောပွီး မှနျပွတငျးပေါကျ အိမျသုံး ပစညျး နဲ့ ရှံ့ပေ နတေဲ့ ဘှတျဖိနပျ တှကေို ဆေးကွော ပှတျတိုကျပါ ။ ပွီးမှ အဝတျသနျ့နဲ့ ပွနျသုတျ လိုကျပါ ။ သနျ့ပွီး တောကျပွောငျ သှားပါ လိမျ့မယျ ။
လဖကျခွောကျဖတျ တှကေို ရအေေးနဲ့ ရောစပျပွီး မွသွေဇာရညျ အဖွဈ အပငျတှေ ကို လောငျးပေး နိုငျရငျ သဘာဝ မွသွေဇာ ကိုရရှိစေ ပွီး အပငျ တှကေို သနျစှမျး ကနျြးမာ စပေါတယျ ။
လဖကျခွောကျဖတျ တှကေို အခွောကျလှမျးပွီး ကွကျဥ နဲ့ ပွုပျစားရငျ မှေးကွိုငျပွီး အရသာ ရှိလှ ပါတယျ ။
လဖကျခွောကျဖတျ ကို အခွောကျလှမျးပွီး မီးရိူ့ရငျ အနံ့အသကျ ဆိုးတှေ ပြောကျတဲ့အပွငျ ခွငျလညျး ပွေးတယျ ။ ခွငျဆေးခှေ အစားလညျး အသုံးပွု နိုငျပါတယျ ။
လဖကျခွောကျဖတျ တှေ ကို နလှေနျးပွီး ခေါငျးအုံး ထဲထညျ့ ခေါငျးအုံ့ အိပျရငျပြော့ပွောငျးစှာ အိပျစကျ ရရုံ တငျမက အပူကိုပါ ကစြပေါတယျ ။
လဖကျခွောကျဖတျ ကို မကျြနှာပျေါ ပှတျတိုကျ ပေးခွငျး ဖွငျ့လညျး မကျြနှာပျေါရှိ အမဲစကျ / တငျးတိတျမြား ပြောကျကငျး စပေါတယျ ။
ပွဈရတော့မဲ့ လဖကျခွောကျ တှကေို အကြိုးရှိရှိ သုံးဖွဈ စရေနျ ရညျရှယျရငျး မြှဝပေေးလိုကျ ပါတယျရှငျ
Credit to အကယျဒမီ